मलेसियाबाट आएको शव बुझ्न एयरपोर्ट पुगेका नानीबाबुसहित एक परिवार भावविह्वल ! – live 60media
काठमाण्डाै / राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को जहाजमार्फत मलेसियाबाट २४ वटा नेपालीको शव नेपाल ल्याइएको छ । मलेसियामा रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका अभिभावकको शव जहाजले शनिबार ल्याइदिएपछि त्रिभुवन विमानस्थलमा भावविह्वल भएका साना नानीाबाबुसहित एक परिवार !
निगमको वाइडबडी ए ३३० जहाजले मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरबाट एकैपटक २४ वटा शव र तीन वटा अस्तु नेपाल ल्याएको हो। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसियामा विभिन्न समयमा ज्यान गुमाएका नेपालीको शव बिहान वाइडबडी जहाजमार्फत नेपाल ल्याइएको निगमको उडान सञ्चालन विभागले जानकारी दिएको छ । वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको समन्वयमा नेपाल ल्याइएका ती शव आजै आफन्तलाई जिम्मा लगाइएको छ ।
← गर्भावस्थामा पेटको बच्चा चल्दा आमाले बुझ्नु पर्ने यी ७ कुराहरु..
मलेशियाबाट २४ वटा नेपालीको शव नेपाल ल्याएका क्याप्टेन विजय लामाले पोखे यस्तो दु:ख..भावुक हुदै यसो भन्छन् →